Show All Most Popular Cutlery Feast Meal What’s New Homemade Burger Brunch Pizza Main Pasta Rice Appetizer & Salad Side Dessert Beer Coffee Fresh Natural Juice - Sugar Free Cold Drinks
Café del SeOUL (Golden City)
#1 SALES I Classic Cheese Burger with French Fries (ကြက်ဥများများဘာဂါနှင့် အာလူးချောင်းကြော်)(ၾကက္ဥမ်ားမ်ားဘာဂါႏွင့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Kebab & Salad (ဂီဘတ် နဲ့ အရွက်သုပ်) (ဂီဘတ္ နဲ႔ အ႐ြက္သုပ္)
SIGNATURE I Slow Cooked Chicken Caesar Salad (SIGNATURE I အနှေးချက် ကြက်သား ဆီဇာအရွက်သုပ်)(SIGNATURE I အေႏွးခ်က္ ၾကက္သား ဆီဇာအ႐ြက္သုပ္)
Slow-cooked Juicy and tender grilled chicken breast, Romain lettuce, Crouton, Quail egg, Anchovy, Bacon flakes, Parmesan cheese, Homemade Caesar dressing.
၆၂ ဒီဂရီ နဲ့ သေချာချက်ထားသော ကြက်သား ၊ ရိုမိန်းဆလပ်ရွက်၊ ပေါင်မုန့်ခြောက်၊ ငုံးဥ ၊ ငါးပါးနီ ၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ ပါမစန်ချိစ်၊ အိမ်လုပ်ဆီဇာဆောစ့်
Crispy french fries with Truffle oil & Parmesan cheese
HEALTHY MEAL I Korean Salad Bibimbap (HEATH MEAL I ဆော့စ်နှပ်ပီး ကင်ထားသော အသား)(HEATH MEAL I ေဆာ့စ္ႏွပ္ပီး ကင္ထားေသာ အသား)
Grilled marinated meat, Marinated cucumbers, Sauteed mushroom and zucchini, Fresh mixed lettuce, Poached egg, Choice of Rice.
သခွားသီးနှပ် ၊ မှိုချက် ၊ ဇူခီးနီသခွား ၊ ဆလပ်ရွက်စုံ ၊ ရေကြော်ကြက်ဥ ၊ ထမင်းရွေးပါ
Grilled Cheese Sandwich (ချိစ်ကင်ညှပ်ပေါင်မုန့်)(ခ်ိစ္ကင္ညႇပ္ေပါင္မုန႔္)
Homemade Toast Bread, Cheddar Cheese, Sunny Side Up Egg Tip. Kids favourite! American soul food.
BEST SELLER I Fish and Chips
Traditional British dish, Tartar sauce, lemon slice, fried capers Tips: Squeeze the Lemon juice on Fish!
ဗြိတိန် ရိုးရာဟင်းလျာ ၊ တာတာ ဆော့စ် ၊ လီမွန်စိတ် ၊ ကပ်စပါးကြော် ။ အကြံပေးချက်များ - ငါးပေါ်သို့ လီမွန်ရည်ကိုညှစ်ပါ
Fresh spinach sautéed with garlic and olive oil. Spinach provides higher levels of vitamins A and E, protein, fiber, zinc, thiamin, calcium, and iron.
BBQ Smoked Baby Pork Ribs (Spain)
Grilled Sweet Corn, Potato Wedges, Roasted tomatoes, Cole slow Tips: Try with Extra Peri Peri or BBQ Sauce.
ပြောင်းဖူးအချို ကင် ၊ အာလူးပြာ ၊ လှော်ထားသော ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ဂေါဖီသုပ် ၊၊ ပယ်ရီ ပယ်ရီ ဆော့စ် (သို့) ဘာဘီကျူး ဆော့စ် ဖြင့် တွဲဖက်၍ စားပါ ၊၊
First: Bake in the oven, removes bad fats! Second: Fry in clean oil, Moist inside & crispy outside! The original menu is cooked in the oven and then fried. The inside is moist and the outside is crispy. Combo incl. Roasted potatoes & carrots &corn, and coleslaw.
ပထမဦးစွာ အဆီများကို ဖယ်၍ အိုဗမ်ထဲတွင် ကင်သည်။ ထို့နောက် ဆီသန့်ဖြင့်ကြော်၍ အတွင်းထဲတွင် စွတ်စို၍ အပြင်ဘက်တွင် ကြွပ်ရွသည် ၊၊ ပွဲကြီးတွင် အာလူးကင် ၊ ဥနီကင် ၊ ပြောင်းဖူး နှင့် ဂေါဖီသုပ် ပါဝင်သည်၊၊
First: Bake in the oven, removes bad fats! Second: Fry in clean oil, Moist inside & crispy outside! Highly recommended! A magical chicken that keeps you addicted. Spicy, soft, savory, sweet, and sour. A fantastic combination of flavors. Combo incl. Roasted potatoes & carrots &corn and coleslow.
မိမိနှစ်သက်ရာဆော့စ် နှင့် ကြက်သား သို့မဟုတ် အမဲသားရွေးပေးပါ
Chili Mayo Wing Chicken
Aglio Olio Pepperoni
Pork Pepperoni, Bacon, Cayenne Pepper. A fantastic combination of spiciness & Richness!
Rib Eye Steak 700-800g (နံရိုး အသားစတိတ် ၇၀၀ - ၈၀၀ ဂရမ်)(နံ႐ိုး အသားစတိတ္ ၇၀၀ - ၈၀၀ ဂရမ္)
Rib-Eye Bone-in, Angus, USA, Roasted Whole garlic & Tomatoes, King oyster mushrooms with truffle oil and Brwon jus. Remark: Meat might be cooked more while delivered. Please order 1 lower doneness in case of 'delivery' or 'pick up'.
အရိုးပါမျက်လုံးနံရိုး ( အမ်းဂတ် ၊ အမေရိကန် ) ၊ ကြက်သွန်ဖြူ နှင့် ခရမ်းချဥ်သီးကင် ၊ ကမာမှိုကြီး နှင့် မြေအောင်းမှိုဆီ ၊ အညိုဆော့စ် အသိပေးချက် - အသားက ရောက်သည့်အချိန်တွင် ပိုမိုကျက်သွားနိင်ပါသည် သို့ဖြစ်ပါ၍ အသားအပူချိန်ကိုတဆင့်လျော့၍မှာပေးရန် အကြံပြုပါရစေ၊
Wagyu Steak, MS 5
Wagyu steak, Marbling Score 5, 200g, Australia, Potato puree, Sauteed spinach, Asparagus, Carrot, Baby Corn with Brown jus. Remark: Meat might be cooked more while delivered. Please order 1 lower doneness in case of 'delivery' or 'pick up'.
Cheesy Butter Garlic French Fries
Signature powder withasweet and milky flavor. French fries with savory cheese sauce and garlic sauce.
နို့နှင့်ချိုအီသောအရသာ ထူးရှယ်အမှုန့် ၊ ကြက်သွန်ဖြူစေဘရီချိစ်ဆောစ့်နှင့် အာလူးချောင်းကြော် ။
Korean Bulgogi Burger with French Fries (ကိုရီးယား ဘူဂိုးဂီဘာဂါနှင့်အာလူးချောင်းကြော်)(ကိုရီးယား ဘူဂိုးဂီဘာဂါႏွင့္အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Eggmany Burger with French Fries (ကြက်ဥများများဘာဂါနှင့် အာလူးချောင်းကြော်)(ၾကက္ဥမ်ားမ်ားဘာဂါႏွင့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Soft scrambled egg, Bacon, Cheddar cheese, Carmelized onion, Mild chili sauce, Homemade Burger Bun.
အပျော့ကြက်ဥမွှေကြော် ၊ ဝက်ပေါင်ခြောက်၊ အိုင်းရစ်ချက်တာချိစ်၊ ကြက်သွန်ချက် ၊ ရှယ်ငရုတ်မရိုဆောစ့် ၊ အိမ်လုပ်ဘာဂါပေါင်မုန့်
BBQ Pulled Meat Burger (with French Fries)(ကြွပ်ရွနေသော ငါးဘာဂါနှင့် အာလူးချောင်းကြော်)(ႂကြပ္႐ြေနေသာ ငါးဘာဂါႏွင့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Crispy Fish Burger with French Fries (ကြွပ်ရွနေသော ငါးဘာဂါနှင့် အာလူးချောင်းကြော်)(ႂကြပ္႐ြေနေသာ ငါးဘာဂါႏွင့္ အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္)
Dory fish fillet, Jalapeno, Tartar sauce, Tomato, Lettuce, Onion, Homemade pickled cucumber, Homemade Burger Bun.
ဒိုရီငါးအပြား၊ ဂျလပီးနိုး ငရုတ် ၊ တာတာဆောစ့် ၊ ၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ဆလပ်ရွက် ၊ကြက်သွန်နီ ၊ အိမ်လုပ်သခွားပုသနပ် ၊ အိမ်လုပ်ဘာဂါပေါင်မုန့်
SIGNATURE I CDS Burger with French Fries
BEST SELLER I A-Thar EggMany Burger I
Quesadillas & Salad (ကွာစဒီလာ နဲ့ အရွက်သုပ်)(ကြာစဒီလာ နဲ႔ အ႐ြက္သုပ္)
BEST SELLER I EggMany Sandwich (BEST SELLER I ဥများများညှပ်ပေါင်မုန့်)(BEST SELLER I ဥမ်ားမ်ားညႇပ္ေပါင္မုန႔္)
Homemade toast bread, slice ham, soft scrambled egg, tomatoes, lettuce, signature chili mayo sauce
အိမ်လုပ်ပေါင်မုန့်ကင် ၊ ကြက်သား‌ ပြား ၊ ကြက်ဥမွှေကြော် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ဆလပ်ရွက် ၊ ရှယ်ငရုတ်ဆောစ့်
Tuna Many Sandwich
Homemade Toast Bread, Tuna& Onion stuffing, Slice of apple, Tomatoes, Homemade Mayo Sauce, Mustard sauce
အိမ်လုပ်ပေါင်မုန့် ၊ တူနာနှင့် ကြက်သွန်နီအစာသွပ်၊ ပန်းသီးပြား၊ ခရမ်းချဥ်သီး ၊ အိမ်လုပ် မရိုဆော့စ်၊ မုန်ညင်းဆော့စ်
BEST SELLER I Pizza Del SeOUL
Choice of 'Tomato' or 'Basil Pesto' sauce, mozzarella, Parmesan cheese, rucola, pitted olive, cherry tomatoes. Tips: Dip the edges in our garlic sauce.
ဘေဆယ်ဆောစ့် သို့မဟုတ် ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့် ၊ မိုဇာရယ်လာချိစ် ၊ ပါမစန်ချိစ် ၊ ရူကိုလာအရွက် ၊ သံလွင်သီး ၊ ချယ်ရီ ခရမ်းချဉ်သီး အကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် ပိုအရသာရှိပါတယ် ဝက်ပေါင်ခြောက်လေး အပိုထည့်စားဖို့ အကြံပြုပါတယ်
Emmental, gorgonzola, camembert, mozzarella, Parmesan cheese with Grilled apple & Natural honey. Tips: Dip the edges in our garlic sauce
ပန်းသီးစိတ် ၊အန်မတယ်ချိစ်၊ဂေါ်ဂွန်ဇိုလာချိစ်၊ကန်မဘတ်ချိစ်၊ပျားရည်၊မိုဇာရယ်လာချိစ်၊ပါမစန်ချိစ် အကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် အရသာပိုရှိပါတယ်
Roasted mushrooms, Truffle oil, Mushroom cream sauce, Caramelized onion, Mozzarella, Parmesan cheese Tips:Dip the edges in our garlic sauce
မှို ၊ မြေအောင်းမှိုဆီ ၊ ခရင်မ် မှိုဆော့စ် ၊ ကြက်သွန်ချက် ၊ မိုဇာရယ်လာချိစ် ၊ ပါမစန်ချိစ်Tips: Dip the edges in our garlic sauceအကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် အရသာပိုရှိပါတယ်
BEST SELLER I Classic Pepperoni Pizza
Bacon, chicken, sausage, prawn, squid, mozzarella cheese, rucola , mushroom & egg.
ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့် ၊ မိုဇာရယ်လာချိစ် ၊ ပါပါရိုးနီ ဝက်သားပြား ၊ ပါမီဆန် ချိစ် အကြံပြုချက် - ပီဇာအနားသားလေးတွေကို ကြက်သွန်ဖြူဆောစ့်နဲ့တွဲဖက်စားသုံးလျင် အရသာပိုရှိပါတယ်
Grilled Seabass with Fresh Herbs Sauce
Sauteed bok Choi, Onion chutney, Capers, Roasted potato, Lemon butter herb dressing.
Beef stew braised in red wine, carrots, pearl onions, mushrooms, bacon
Choice of 'Chicken' or 'Beef' or 'Vegetarian', Choice of ' Creamy mushroom' or 'Tomato' sauce, beef patty, roasted tomatoes, potato puree. Tips: Kids' favorite!
ကြက်သား ၊အမဲသား (သို့) အသီးအရွက် ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ရွေးချယ်ပါ ။ ခရင်မ်မှိုဆောစ့် သို့မဟုတ် ခရမ်းချဉ်သီးဆောစ့်၊ အမဲသား၊ခရမ်းချဉ်သီး၊အာလူးအနှစ်
BEST SELLER I Spaghetti Aglio Olio
Classic Italain Style. Garlic flavored olive oil,
အကောင်းစား အီတလီစတိုင်၊ ကြက်သွန်ဖြူသံလွင်ဆီချက်၊ ဝက်‌ပေါင်ခြောက် သို့မဟုတ် ကြက်သား ၊ ကရန်းနီငရုတ်ကောင်း
First, Choice of sauce, Second, Choice of 'wagyu, marbling score 5, Australia' or 'Slow-cooked chicken breast steak' Alert: Steak can be cooked more while delivered.
ဆော့စ် လေးမျိုးထဲမှ တစ်မျိုးရွေးချယ်ပါ ။ အရည်အသွေး နံပါတ် ၅ အဆင် ရှိ အော်စီ နိုင်ငံ ထွက် ဝါဂူး အမဲ သား(သို့) နူးညံ့စွာ ချက်ပြုတ်ထားသော ကြက်သား ။ အသိပေးချက် - အသား များကို ရောက်ရှိ ချိန်တွင် ထပ်မံ၍ ချက်ပြုတ်နိုင်ပါသည်။
Korean Kimchi Fried Rice & Salad (ကိုရီးယား ကင်ချီ ထမင်းကြော် & Salad)(ကိုရီးယား ကင္ခ်ီ ထမင္းေၾကာ္ & Salad)
Choice of 'Bacon' or 'Chicken' Meat, Snow bean, Onion, Sunny side up egg, Green salad and lemon dressing. Choice of Rice.
ဝက်ပေါင်ခြောက် သို့မဟုတ် ကြက်သား သို့မဟုတ် သတ်သတ်လွတ် ရွေးပါ ထမင်းရွေးပါ ၊ နှင်းပဲ ၊ ကြက်သွန်နီ ၊ မကျက်တကျက် ကြက်ဥကြော် ၊ လီမွန်ဆော့စ့်နယ် အရွက်စိမ်းသုပ်
Korean Cheese Kimchi Fried Rice & Salad (ကိုရီးယား ချိစ်ကင်ချီ ထမင်းကြော် & Salad)(ကိုရီးယား ခ်ိစ္ကင္ခ်ီ ထမင္းေၾကာ္ & Salad)
Choice of 'Grilled marinated meat' & 'Rice', Kimchi, Mozzarella Cheese, French beans, Jalapeno, Sunny side up egg, Green salad and Lemon dressing.
ဆော့စ်နှပ်ပီးကင်ထားသော အသားနှင့်ထမင်းရွေးပါ ၊ ကင်ချီ ၊ မိုဇာရယ်လာချိစ် ၊ပြင်သစ်ပဲ ၊ ငရုတ်နီ ၊မကျက်တကျက် ကြက်ဥကြော် ၊လီမွန်ဆော့စ်နယ် အရွက်စိမ်းသုပ်
Korean Tuna Kimchi Fried Rice (ကိုရီးယား ကင်ချီတူနား ထမင်းကြော်)(ကိုရီးယား ကင္ခ်ီတူနား ထမင္းေၾကာ္)
Original Korean recipe, Sunny side up egg, Choice of Rice.
ကိုရီးယားအရသာ အစစ် ၊မကျက်တကျက် ကြက်ဥကြော် ၊ ထမင်းရွေးပါ
BBQ Pulled Meat Rice (ဘာဘီကျူ အသားမျှင် ထမင်း)(ဘာဘီက်ဴ အသားမွ်င္ ထမင္း)
Choice of 'Pulled Chicken' or 'Pulled Pork', Coleslaw, Caramelized onion, Choice of Rice.
ကြက်သားမျှင် သို့မဟုတ် ဝက်သားမျှင် ရွေးပါ ၊ ‌အနောက်တိုင်းဂေါ်ဖီသုပ် ၊ ကြက်သွန်နီချိုချက်၊ထမင်းရွေးပါ
Avocado Jang Bibimbab
Bibimbap made with avocado marinated inasecret recipe! Marinated cherry tomatoes, sunny side up egg, green salad. Tips: Recommended for people who are onadiet or have diabetes (with brown rice)
နှပ်ထားသော ထောပတ်သီး ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လျို့ဝှက်ဟင်းလျာ ဘီဘင်ဘတ်ပ် ၊ နှပ်ထားသော ချယ်ရီခရမ်းချဉ်သီး ၊ ကြက်ဥ မကျက်တကျက် ၊ ဆလတ်ရွက် ။ ( အကြံပြုချက် - ဝိတ်ချနေသူများနှင့် ဆီးချိုရောဂါ ရှိသူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ )
Cobb Salad (ကော့ဘ်အရွက်သုပ်) (ေကာ့ဘ္အ႐ြက္သုပ္)
Romaine lettuce, Tomatoes, Grilled chicken, Bacon flakes, Quail eggs, Avocado, Crouton, Blue cheese dressing.
ရိုမိန်းဆလပ်ရွက် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ကြက်သားကင် ၊ ဝက်ပေါင်ခြောက် ၊ငုံးဥ ၊ ထောပတ်သီး ၊ပေါင်မုန့်ခြောက် ၊ အပြာချိစ်ဆောစ့်
Fantastic flavor of button mushroom, shiitake mushroom, Cream & Truffle oil.
ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ မှိုအရသာ၊သျှီတာကီမှို၊ ခရင်မ် နှင့် ‌မြေအောင်းမှိုဆီ
Fresh Potatoes Baked in Oven
Choice of 'Chicken' or 'Beef' Meat Ball with Tomato Sauce & Cheese
Made by Homemade Baguette. Bake With Butter & Garlic
Fresh cabbage, carrots mixed with homemade mayonnaise and dressing.
Homemade Sauce, 300ml
Healthy and fresh homemade sauces
Italian classic, mascarpone cheese, espresso
French Macaroon (2pcs)(Croissant )
Chef's choice, piece of daily cake
Fudgy sponge Cake with mocha cream with salted caramel sauce. The perfect combination of sweetness and saltiness..
a Belgian White Ale brewed with real Curacao orange peel withahint of coriander, hasaunique, refreshing flavor and spicy nose.